» भीआईपी’ बनेर गाउँ पुगेका, नेताहरुलाई गाउँलेले डोकोमा,पानी बोकाएर उकालो हिँडाएपछि भयो यस्तो”आखिर कुन ठाउँमा गरियो त यस्तो ? हेर्नुहोस भीआईपी’ बनेर गाउँ पुगेका, नेताहरुलाई गाउँलेले डोकोमा,पानी बोकाएर उकालो हिँडाएपछि भयो यस्तो”आखिर कुन ठाउँमा गरियो त यस्तो ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
भीआईपी’ बनेर गाउँ पुगेका, नेताहरुलाई गाउँलेले डोकोमा,पानी बोकाएर उकालो हिँडाएपछि भयो यस्तो”आखिर कुन ठाउँमा गरियो त यस्तो ? हेर्नुहोस
हेटौंडा- गाउँमा खानेपानीको समस्या बिकराल रहेको कुरा उक्त, गाउँमा यसअघि नपुगेका नेताहरुलाई के थाहा । तर, जब उनीहरु अर्कै कार्यक्रमका, लागि ‘भीआईपी’ बनेर गाउँ पुगे, तबमात्र उनीहरुलाई थाहा भयो कि त्यहाँ पानीको साँच्चै समस्या, रहेछ भन्ने कुरा ।
“सांसद् र ,जनप्रतिनिधिलाई गाग्रीमा पानी बोकाउँदा स्थानीय पेट मिचीमिची हाँसेका थिए । नेताहरुले पानी भरिएको गाग्री डोकोमा राखेर विद्यालयसम्म त पुर्‍याए, त्यसपछि उनीहरुको शारीरिक पीडा दयालाग्दो देखिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।